Samy manana ny kajiny sy ny paikadiny ny rehetra ary tokony halalaka ny firotsahana. Na ny vondrona iraisam-pirenena aza mivoy izany. Tsy arakarak’izay anefa ny zava-misy fa misy ny olona miketrika mangina any ambadika any ary voalaza fa misy vondrona sy firenena tsy mikendry afa tsy ny higoka ny harena eto amin’ny firenena manosika azy. Mbola sarotra ho azy ireny anefa ny handresy ka voizina hatrany ny fanilihana ireo efa hita fa manana ny herijika toa an’i Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina, Hery Rajaonarimampianina. Ezahina haparitaka ny foto-kevitra hoe mila olom-baovao ny firenena ka tsy tokony hirotsaka ireo olona ireo sy ny hafa mitovitovy aminy. Paikadin’ny mpanjanaka anefa no tena tian-kapetraka ao anatin’io resaka sy foto-kevitra voizina io satria io olona ambara ho olom-baovao io no sokajiana amin’ilay hoe soavaly vaovao, ka mora baikoina sy azo fehezina tsara hahafahana mitazona ny tombontsoan’ny mpanjanaka eto amin’ny firenena. Ho mora amin’ny mpanjanaka avy eo ny manao izay danin’ny kibony amin’ny fangoronan-karena eto Madagasikara. Ho sarotra mantsy ny hifehy ireo efa teo izay efa somary mafy loha sy atahorana hitrifana sy hivadika na dia misy ihany aza no efa hita taratra fa manana fironana any amin’ny firenena efa malaza ho mpangoron-karena eto. Etsy an-daniny, vao afak’omaly i Marc Ravalomanana no nanambara fa daty sisa andrasany ary efa mandeha ny fifampiresahany amin’ny sehatra iraisam-pirenena amin’ny firotsahany. Mitohy ny fifampidinihana amin’ny vahoaka izay miandry fotsiny sisa satria iaraha-mahita ny fiandrandran’ny Malagasy azy, ka hipoka olona avokoa izay toerana lalovany. Dia sanatria ve ho anisan’ny niharan’ny antsojay vokatry ny fiarovana ny tombontsoan’ny mpanjanaka ihany koa ny tenany ? Niaraha-nahita fa tsy manaiky lembenana amin’ny fambotriana tanindrazana ataon’ny vahiny ny tenany, ka izany no namotehana azy.